Funda indlela yokwakha i-imeyili izixhumanisi kwiwebhusayithi yakho
Ukusebenzisa i-Mailto Command ku-Iwebhusayithi Yakho
Funda indlela yokubhala izixhumanisi ze-imeyli
Yonke iwebhusayithi ine "ukunqoba". Lezi yizinyathelo ezibalulekile ofuna abantu abaza kuleso website ukuba bathathe. Isibonelo, kusiza se-eCommerce , "ukunqoba" kuyoba lapho umuntu engeza izinto enqoleni yakhe yokuthenga bese eqedela lokho kuthenga. Amawebusayithi angekho eCommerce, afana namasayithi ezinhlangano zezinsizakalo ezisebenzayo (ababonisi, abameli, ama-accountants, njll), lokhu "ukunqoba" ngokuvamile lapho isivakashi sifinyelela futhi uxhumane nenkampani ukuze ufunde kabanzi ngalokho abanikeleyo noma hlela umhlangano wohlobo oluthile.
Lokhu kungenziwa ngekholi yefoni, ifomu lewebhu, noma ngokujwayelekile, ngokumane uthumele i-imeyili usebenzisa isixhumanisi se-imeyili esivela kuleyo website.
Ukubeka izixhumanisi kusayithi lakho kulula njengokusebenzisa i- isici - okusho "ihange" kodwa ngokuvame ukubizwa ngokuthi "isixhumanisi". Ngezinye izikhathi abantu bakhohlwa ukuthi ungaxhuma kunamanye amakhasi ewebhu noma amadokhumenti namafayela (ama-PDF, izithombe, njll). Uma ufuna abantu bakwazi ukuthumela i-imeyili kusuka kusixhumanisi sekhasi lewebhu , ungasebenzisa i-mailto: umyalo kulesi sixhumanisi. Lapho izivakashi zendawo zichofoza kulesi sixhumanisi, iklayenti ye-imeyli ezenzakalelayo kukhompyutha noma idivayisi yabo izovula futhi ivumele ukuba ithumele i-imeyili ekhelini olichazile ekukhokheni isikhangiso sakho. Ake sibheke ukuthi lokhu kwenziwa kanjani!
Ukusetha i-Mailto Link
Ukukhokha isixhumanisi se-imeyili , uzoqala ukudala isixhumanisi se-HTML njengobe ungavamile, kepha esikhundleni sokusebenzisa i-http: // "imfanelo" ye-element, uzoqala ukubaluleka kwempahla ngokubhala umbhalo: engeza ikheli le-imeyili ofuna lesi sixhumanisi ukuba uthumele kuwo.
Isibonelo, ukusetha isixhumanisi se-imeyli ngokwakho, ungabhala ikhodi ngezansi, ubeke esikhundleni sombhalo wendawo "CHANGE" umbhalo ngekheli lakho le-imeyli:
mailto:CHANGE "> Thumela i-imeyili ngombuzo wakho
Kulesi sibonelo esingenhla, ikhasi lewebhu lizobonisa umbhalo othi "Sithumelele i-imeyili ngemibuzo yakho" futhi, uma uchofoziwe, leso sixhumanisi sizovula iklayenti le-imeyili elalizoqala ukuhamba nayo nganoma yiliphi ikheli le-imeyili olichazile kukhodi.
Uma ufuna umlayezo uhambe kumakheli amaningi e-imeyili, umane uhlukanise amakheli e-imeyili nge-comma, njengale:
mailto:email1@adress.com, email2@address.com "> Sithumelele i-imeyili ngemibuzo yakho
Lokhu kuhle kakhulu futhi kuqondile, futhi izixhumanisi eziningi ze-imeyili kumakhasi ewebhu zimise lapha. Kodwa-ke, kukhona nolwazi oluthe xaxa ongalungisa uphinde uthumele ngezixhumanisi ze-mailto. Iziphequluli eziningi zanamuhla nezamaklayenti ze-imeyili zisekela okungaphezulu nje komugqa othi "Kuya". Ungacacisa le ndaba, uthumele amakhophi e-carbon, namakhophi e-carbon carbon. Ake sibambe kancane kancane!
Ama-Mailto Links Okuthuthukisiwe
Uma udala isixhumanisi se-imeyili ngezici ezingeziwe, uyiphatha ngokufanayo neskripthi se-CGI esisebenzisa umsebenzi we-GET (uchungechunge lombuzo noma izimfanelo emgqeni womyalo). Sebenzisa uphawu lombuzo ngemva kwekheli le-imeyili lokugcina elithi "Kuye" ukukhombisa ukuthi ufuna okungaphezu nje kokuthi "Kuya" ukuze kufakwe. Bese ucacisa ukuthi yiziphi ezinye izakhi ongazithandayo:
cc-ukuthumela ikhophi yekhabhoni
bcc-ukuthumela ikhophi ye-carbon carbon
isihloko - ukuze uthole isihloko
umzimba -ngokomzimba womyalezo womlayezo
Lawa onke amagama = amanani amabili. Igama lihlobo lohlobo olululwe ngenhla ofuna ukuyisebenzisa futhi inani yilokho ofuna ukulithumela.
Ukuthumela kimi kimi futhi cc Umhlahlandlela weWeblogs, uzobe uthayipha okungezansi (ukufaka esikhundleni se-imeyile "imilayezo" lapha ngamakheli wangempela):
Ukwengeza izakhi eziningi, hlukanisa izakhi zesibili nezalandela nge-ampersand (&).
& bcc = EMAIL-LAPHA
Lokhu kwenza isixhumanisi se-imeyili sikwazi ukufunda ikhodi yekhasi lewebhu, kodwa sizobonisa njengoba uhlose eklayenti le-imeyili. Ungasebenzisa futhi isibonakaliso + esikhundleni sesikhala noma isikhala sokufaka isikhala, kodwa lokho akusebenzi kuzo zonke izimo, futhi ezinye iziphequluli empeleni zizothumela + esikhundleni sesikhala, ngakho-ke ikhodidi ebhalwe ngenhla ngempela iyindlela engcono kakhulu yokwenza yenza lokhu.
Ungakwazi futhi ukuchaza umbhalo othile womzimba ezixhumaneni zakho ze-mail, ukunikeza abafundi iseluleko ngalokho okufanele ubhale emlayezo. Njengesihloko, udinga ukufaka izikhala, kepha udinga ukufaka imigqa emisha. Awukwazi nje ukubeka i-carriage ukubuyela ku-mailto isixhumanisi bese unombhalo womzimba ubonisa umugqa omusha. Esikhundleni salokho, usebenzisa uhlamvu lwe-encoding% 0A ukuze uthole umugqa omusha. Ukuze uthole ikhefu lesigcawu, faka ezimbili ezilandelanayo:% 0A% 0A.
Khumbula ukuthi kuxhomeke eklayenti le-imeyili lapho umbhalo womzimba ufakwa khona.
= umzimba = I% 20a% 20a% 20%.% 0AI% 20ngayenza% kufana ne-% 20to% 20 yazi:
Ukubeka konke ndawonye
Nasi isibonelo sokuxhumanisa okuphelele kwe-mailto. Khumbula, uma ukopisha futhi unamathisele lokhu kumakhasi akho ewebhu, qiniseka ukuthi ushintshe umnikazi wendawo okhonjiswe ikheli le-imeyili ekhelini langempela le-imeyli ongena kulo.
The Downside kuya imeyili Links
Lowo ongalungile mayelana nokusebenzisa izixhumanisi ze-imeyili kukhasi lewebhu ukuthi angakwazi ukuvula umamukeli kwimilayezo ye-imeyli engadingeki. Lokhu kungenxa yokuthi ama-spam-bots adlala iwebhu efuna izixhumanisi ezinamakheli e-imeyili acacile afakwe kuwo. Bese bangezela lawo amakheli ohlwini lwabagaxekile bese baqala i-imeyili ye-barrage.
Okunye kokusebenzisa i-imeyili isixhumanisi ngokubonakala ngokucacile (kukhodi okungenani) ikheli le-imeyli ukusebenzisa ifomu le-imeyili .Lezi fomu zizovumela izivakashi zesayithi ukuba zixhumane nomuntu noma inkampani ngaphandle kokuba nekheli le-imeyili ngaphandle lapho ukuze ama-spambots asebenzise kabi.
Yiqiniso, amafomu ewebhu angahlekelwa phansi futhi ahlukumezwe futhi, futhi angathumela ukuthunyelwa kogaxekile, ngakho-ke akusikho isixazululo esiphelele. Khumbula, uma ukwenza kube nzima kakhulu ukuthi u-spammers ukuthumela i-imeyili, cishe nawe wenza kube nzima kumakhasimende afanelekile ukuba akuthumele i-imeyili! Udinga ukuthola ibhalansi futhi ukhumbule ukuthi i-imeyili yogaxekile, ngokudabukisayo, ingxenye yezindleko zokwenza ibhizinisi online. Ungathatha izinyathelo zokunciphisa ugaxekile, kodwa amanye amanani azokwenza kuhambisane nalawo maqondana nokusemthethweni.
Ekugcineni, izixhumanisi "ze-mailto" zikhulu kakhulu futhi zilula ukufaka, ngakho-ke uma konke okufunayo ukukwenza kuhlinzeka izindlela zesithameli sesayithi ukuphuma nokuthumela umlayezo kumuntu, lezi zixhumanisi ziyisisombululo esihle.
Okufanele Ukwenze Uma Ama-Mailto Amafomu Engasebenzi
Indlela yokwakha ikhasi leWebhu
Indlela Yokucindezeleka Hlola Okuqukethwe Iwebhusayithi Yakho
Ukushintsha Kwamazinga Okutholakala Kwenethiwekhi Kungathinta Iwebhusayithi Yakho
Ukulawulwa Kwewebhu: Ukugcina i-Web Server kanye neWebhu
Ikhasi lakho lewebhu kufanele libe yisikhathi eside kangakanani
Ukuqinisekiswa kwe-SSL okuphansi kunazo zonke (EV) Izitifiketi
Umhlahlandlela wesinyathelo ngezinyathelo ekudaleni i-Hyperlink ku-Dreamweaver
Iyini ifayela le-DM?
Ama-Hulu Basics futhi Awuqhathanisa Kanjani Netflix
Hambisa i-PC PC Data ku-Mac yakho ngokuzenzakalelayo
Isizathu Sokuba Kufanele Uzinakekele / Chofoza Ukukhwabanisa
I-Car USB Port ayikhokhisi ifoni
Fihla Abangani Ku-Facebook Ukugwema Ukubona Okuthunyelwe Okungawuthandi
Ama-TV OLED - Okudingeka Ukwazi
Lisho ukuthini i-LOML?
Ama-Players nama-Discs we-Blu-ray we-4K we-HD 4K - Okudingeka Ukwazi
Indlela Yokulayisha Ama-E-Amabhuku Wakho E-Google Play Amabhuku
Izindlela Zokugwema Amakhokhithi Ezingqayizivele ze-iPhone ze-iPhone
Izakhiwo ze-Slide ku-PowerPoint 2007
Ezinye zezinjini zokusesha ze-Google ezingu-10
Izinhlelo zokusebenza ze-iPad Best Best
I-Art Academy Sketchpad - Ukubuyekezwa kwe-Wii U
Bhala i-cookie yakho ye-HTTP yokuqala
I-Linksys i-WRT54G2 Iphasiwedi ezenzakalelayo
Indlela Yokusesha Engcono: Iziphambeko Ezinhlanu Zokugwema
Amakheli Okuvala Akudingekile